यात्रा ३ : वैदेशिक रोजगारी र प्रेम » Khabarbit
by बिनोद कोइराला
मानिसको जीवन बाचुन्जेल हतार नै हुँदो रहेछ । काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईष्र्या त्याग्छु भनेपनी व्यवहारमा गर्न नसकिने । ५ बजेसम्म अनिवार्य कार्यलयको काम गरेर डिभाइसमा उपस्थित जनाएर हिँड्नुपर्ने । ५ बजे नै काठमाडौंका लागि राति छुट्ने निकै चटारो थियो । घरबाट निस्किँदा मनमा योजना बनाउँदै गएँ, ‘आज काम गरेर गएँ भने कम्तिमा छुट्टि त बच्छ ।’
मलाई अगाडिका दिनहरूमा समयको खासै महत्व थिएन । जसले जहाँ बोलाए पनी जाने । दिनभर खालि पेटनै भएपनि गफमै बिताइदिने । यसरी लामो समय सम्मकै अपमान गरेर होला समयले मलाई निकै सताउने गर्छ । त्यसैले होला अचेल मलाई यसले महत्व सिकाउन थालेको छ । जागिरे जीवनमा छुट्टिको निकै महत्त्व हुँदोरहेछ । शनिबार त राजाबार जस्तो ।
सबै काम सक्नै पर्ने । बिहान नै बस काउन्टरमा गएर बुझेँ, ‘दाइ, काठमाडौं कोशी कतिबेला छुट्ने हो ?’ काउन्टर मेरो लागि परिचित थियो । ‘५ बजे किन काठमाडौं जान लाग्यौ भाइ, नजाउ है कोरोना सोरोना केके भन्छन्,’ चपाउँदै गरेको पान थुक्न बाहिर निस्किए र ठट्टा गर्दै भने, ‘कोशिको टिकट छैन भाइ मितेरीमा जाउ, कति नम्बर सिट काटौं ?’
‘स्पेसल ए वा बी जुन भएनि सजिलो मिलाइदिनु न’ मैले भने ।
‘यत्तिको लक्का जवानलाई किन त्यस्तो ? स्पेसल त खालि छैन । ‘बि ४ नम्बरमा जाउ ।’
भाडा कति हो नि दाइ ?
हजार रुपैयाँ ।
ठ्याक्कै हजार ? मिलाउन मिल्दैन? मैले भने ।
लु भैगो ९ सय देउ, अरुलाई ११०० ले काटेको छ, अरुलाई नभन्नु । दाइले भने ।
मैले मुसुक्क हाँस्दै सोचेँ, अहिले पैसा दिन्न, भरे ५ बजे आउँदा ढिलो भयो भने अर्कौ गाडीमा जाउँला । काउन्टरवालालाई भने, ‘दाइ पैसा बोकेको छैन, भरे नै दिउला है ।’ दाइले हवस् भने । म आफ्नो बाटो लागेँ ।
घरमा पुगेर झोलामा कपडा हाल्न थालें । दिदीले भनि, ‘हैन सरको आज छुट्टी कि टाढैको सवारी हो? झोलासोला कसिँदै छ त ।’
‘विद्यालय विदा छ (विद्यार्थीको परीक्षा सकाएर उत्तर पुस्तिका काट्ने विदा) । दिउँसोको काममा चाहिँ जाने हो । र भरे यसो राजाको दर्शन गर्न काठ्माडौं लाग्नु परो भनेर’ म पनि बाङ्गिदै कुरा गरेँ, ‘मामाघर तिर केही कोसेली लान छ भने भन है ।’
‘किन जानुपर्र्यो उता चीनमा कति मान्छे मरे अरे बिथ्थामा पर्दैन जान’ दिदीले नजान अनुरोध गरि । मर्न लेखेको छ भने मरौंला, आखिर जन्मेपछी मृत्यु अवश्य छ । कसैले पनि संसारमा अजम्बरी बुटि खाएर आएको छैन भन्दै म भने मैला लुगा बोकेर कलतिर लागेँ ।
दिदीले आफै लुगा धोइदिने भन्दै हट्न भनि । म भने आफ्नो कपडा आफैं धुने अडानमा थिएँ र भने, ‘ आफै धोइन्छ, कसैलाई दुःख नदिने, आजदेखि आफूले खाको थालपनी आफै माझ्छु ।’ ‘लु भयो, तँ सुध्रेको मैले धेरै देखिसकेँ’ दिदीले व्यंग्य गरि । अन्ततः रहरै भए धोइदे भनेर सबै कपडा कलमै छाडेँ ।
घडि हेर्दा साढे ९ बजेको थियो । खाना खाने समय भएकाले दिदीलाई खाना पस्किन आग्रह गरे । दिदी पस्किएको खाना खाएर कार्यालयको पोसाक लागाएँ । अनि कार्यालय ति लागेँ । दिनभरका लागि नियमित काम प्रशस्त थिए । फेरिपनी केही विदाहरु मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच दिमागमा आइरह्यो । एकैछिनपछि सम्झिएँ । कार्यालय प्रयोजनका लागि काठमाडौंबाट केही सामान ल्याउने कुरा हाकिम साबले बेलाबेला गर्नुहुन्थ्यो । ‘सर म भरे काठमाडांै जान्छु, अफिसको सामान पनि ल्याउँछु, यहाँ धेरै खाँचो भइसक्यो,’ हाकिम सरको कोठामा छिरेर मलिन स्वर लिएर भनें, ‘मामा पनि बिरामी हुनुहन्छ अरे हेरेर पनि आउछु ।
उनी चुरोट पिउने गर्दा रहेछन् तर मेरो त्यस्तो कुनै लत थिएन । होटलको काउन्टरको बाहिर झ्यालमा राखेको एक टुक्रा सुपारी टिपेर मुखमा हाले । उनी स्मोकिङ जोन तिर लागे । केही समयपछि हामी बसमा पस्यौं ।
हाकिम सरले प्रस्ताव स्वीकृत दिँदै भने, ‘कति दिनमा आउँछौं ?’ मैले जवामा ५ दिन लाग्ने जानकारी दिए । म बिदा बचाउनका लागि त्यहाँसम्म पुगेको थिएँ । ‘सामान ल्याउँदा काज मिलाइ दिनुपर्यो,’ मैले भने, ‘सबै सामान ल्याउँछु ३ दिनको काज मिलाइ दिनु आखिर यहाँ बाट जाँदा पनि ३ दिन लागी हाल्छ नि ।’ २ दिन बिना भत्ता काज मिलाउने जवाफ हाकिम सरबाट आयो ।
‘सबै सामान ल्याउन सक्छौ के ?’ सरले भने । ‘हुन्छ म जसरी नि ल्याउँछु ।’ प्रतिउत्तरमा मैले भने । सामान प्रशस्त थियो, मलाई भत्ता हैन विदा चाहिएको थियो । एम.बी.एस. अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा नजिक आइरहेको थियो विदा अगाडि सकिन लागिसकेको थियो । मन थोरै भएपनि फुरुक्क भयो । घडि हेरेँ । ५ बजेको थियो । कार्यालयबाट हतार हतार निस्एिर घर पुगेँ । लुगा फेरेँ । सवा ५ बजिसकेको थियो । दिदीले दही चिउरा खाएर जान गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेर झोला बोकेर निस्किएँ ।
एकजना मित्रलाई तयारी अवस्थामा राखेको थिएँ । मोटरसाइकल चढेर बस स्टेन्डसम्म पुगेँ । बस भर्खर आइपुग्दै थियो । काउटरका दाईलाई सोधेँ, ‘दाइ मेरो सिट त छनि ?’ दाइले छ भन्दै टिकट दिए । हुन्छ भनेर टिकट लिएर म आफ्नै सिटमा बसिसकेपछी सोच्न थाले, केही त बिर्सिन ? यसो सम्झिएँ, विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र, म जून कामका लागि जाँदै थिए । एक्कासी चिसो भयो । ‘ए दाइ ५ मिनेट रोक्नु ल, सामान छुटेछ ।’ उत्तालिँदै मैले भने ।
हतारहतार भान्जालाई फोन गरेर टेबलमा भएको फाइल ल्याइदिन भने । भाञ्जाले ५ मिनेटमा ल्याइदिए । मैले लामो सास फेरेँ । पुनः बसमा बसेँ । चालकले सामान सोधे । मैले भयो भन्ने आशयमा टाउको हल्लाए । त्यसपछि गाडी अगाडि बढ्यो ।
बसका सहकाचल परिचित रहेछन् । उनले मलाई भुलिसकेका होलान् । तर मैले चिनेँ । उनी उही पुरानो झापा बसाइमा चिनेका बिजय दाइ थिए । ‘बिजय दाइ हैन ?’ मैले सोधिहालेँ । ‘हो हो, कसरी चिन्यौ ?’ आश्चर्य भावमा उनले सोधेँ । मैले उनलाई चिनाउन तिर लागे । उनी खासै चिन्न चाहेका थिएनन् । उनले यो परिचयको फाइदा उठाउन खोजी रहेछका थिए । बसवाला र काउण्टरको समन्वयको अभावले बी २ नम्बरको सिट २ जनालाई बेचेका रहेछन् । एकजना बृद्ध आमा सिट छेउमा उभिएर गाली गरिरहेकी थिइन् । बिजय दाइ आएर मलाई पछाडी जान अनुरोध गरे । ‘गाह्रो हुन्छ, भोलि पुगेर धेरै काम गर्नुछ’ मैले भने । उनले मासुखाना ख्वाउने आश्वासन दिए । ‘मासु भातमा चै बिकिँदैन दाइ,’ मैले उत्तर फर्काए ।
उनको आश्वासन मलाई चित्त बुझेन । उता वृद्द आमालाई हेरेँ । केही बेरमै दाईलाई भने, ‘तपाईको मासुखानामा हैन, वृद्ध आमा भएकाले छोडेको हो, यसरी बुझ्नुस्’ मैले सिट छाड्दै बिजय दाईलाई भने । अन्तिम सिटमा एउटा युवा झ्यालतिर फर्केर बसिरहेका थिए । म त्यँही गएँ । म जानसाथ उनले म तिर हेरे । चिने जस्तो भान मलाई पनि भयो । ‘ओहो विनोद सर नमस्कार’ उनले भने । म दोधारमा परेँ । ‘नमस्कार सर’ प्रतिउत्तर मैले भने । ‘चिन्नु भएन हो ? म ठगिन भाइ ।’ उनले आफ्नो परिचय दिए ।
‘ओहो कहाँबाट यता आयौ, कहाँ छौ ?’ मैले सोधेँ । मलाई पनि धेरै खुशी लाग्यो । ‘युएई गएको थिएँ, आएको ३ महिना भयो, फेरि जानुपर्छ होला,’ उनले भने, ‘अनि तपाईको के छ ?, कता हुनुहुन्छ ?, हामिलाई बिर्सिनुभयो ?’ एकै सासमा उनले सोधे । ‘छैन बिर्सेको’ मैले उत्तर दिएँ, ‘यतै पेटपाल्नका लागि केहि त गर्नैपर्ने रहेछ ।’
छेउकै सिटमा परिचित नै भएपछि गफगाफ त चल्ने तै भयो । दाई त नेता हुनुभएको छ अरे भन्दै ठट्टा गर्न थाले । उनले वालापन कोट्याउन थाले । उनलाई मेले पढाएको थिएँ । ‘तपाइँले पढाएको २ एकान २, २० सम्म अझै कण्ठ छ । नआउँदा खोलासम्म खेदाउनु हुन्थ्यो, बिर्सिनु भयो होला । तर तपाईको खुब याद आउँछ । तपाइले गर्दा म गणित विषय पास भएको थिएँ । तपाई सहर पसेपछि मेरो पढाइपनी तपाइँ सँगै आएछ ।’ बालापन सम्झिँदै मुस्कुराउँदै उनले लगातार सुनाए ।
म अनि आफ्नो एउटा समयसम्म पुगेँ । जुन ठाउँमा मेरो वालापन बितेक छ, जुन ठाउँको माटोसँग मेरो प्रेम छ । जुन विद्यालय मेरो भविष्यको एउटा पुल थियो । नमिठो लागेर आयो । भाइ खुब आनन्द मानी राखेका थिए । मैले नि खबर अनि तलब सोधेँ । ‘खै सर कस्तो कस्तो नपढेर दुःख पाइयो, एस.एल.सि पास गर्न सकिन, खाडी तिर भासिए ।’ निन्याउरो मुख लगाउँदै सुनाउँदै गए, ‘खै के भनौं, कसरी भनौं । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युएई पुगेको थिएँ, सुन्दर सपनाहरु थिए ।’
उनले सुनाउँदै गए, फेसबुकमा अचानक एक सुन्दर युवती देखेँ, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरे स्वीकार भयो । हाई हेल्लोबाट कुरा हुँदै गयो । धेरै कुरा हुँदै गयो । हामी एक आपसमा मायाको फन्दामा पर्यौँ । मलाई पनि उनी एकदमै नजिक लाग्थ्यो । च्याटबाट सुरु भएको माया भिडियो कलसम्म नि पुग्यो । नियमित लामो समयसम्म कुरा हुन्थ्यो । उनी सुन्दर थिइन् । म पनि मायाको आभास र गहिरो हुँदै गयो । नाम माया, घर देउखुरी दाङ । पढाई एसइइ उतिर्ण गरेको यस्तै कुरा बताउथिन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर र नर्सिङ पढ्ने ठूलो इच्छा भएको बताउँथिन् । मैले पनि उनले पढुन् भन्ने चाहना राखेको थिएँ । फेरि मेरो खाडीमा कमाई राम्रै थियो । मैले उनलाई पढ्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएँ । उनी पनि खुसी भइन् ।
प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो साक्षात्कार नभए पनि भावनात्मक रुपमा नजिक थियौँ । नयाँनयाँ योजना र कल्पनाहरु बुन्दै थियौँ । भनिन्छ प्रेम दुई आत्माहरुको मिलन हो तर, प्रेम त्यति मात्र होइन, अनौठो गहिराई हो । जुन गहिराइमा डुबुल्की मारेपछी छुट्टै संसार जस्तो लाग्ने । म प्रेमको एकोहोरोपनमा लागि सकेको थिएँ । म अविवाहित अल्लारे भएपनी उनीसँग बिहे भएको १० औं वर्ष जस्तै सोच्न थालेछु । प्रेममा अरुका कुरा फिक्का लाग्छन् । यी सबै लक्षण म मा थियो । यसरी जीवन चलिरहेको थियो । एस.इ.इ.को रिजल्ट पश्चात् उनी काठमाडौं हुइकिन् । केही समय बानेश्वरमा आफन्तकोमा बसेरा एउटा नर्सिङ क्याम्पसमा भर्ना भइन् । मैले उनलाई त्यहीँबाट पैसाको बन्दोवस्त गरिरहेको थिए ।
‘बैंसमा स्याल पनि घोर्ले हुन्छ रे’ म संसारमा उनी भन्दा राम्रा मान्छेको पनि जन्म भएको छ भन्ने कुरामा खासै विश्वास गर्दिन थिए । ड्युटी सकिएपछि हस्याङफस्याङ गर्दै भिडियो कल/अडियो कल सबै हुन्थ्यो । आफन्तकामा बस्दा अलिक असहज भयो । म साथिसँग बस्छु भनिन् र मैले हुन्छ भनेको थिएँ । किन मलाई पनि उनको असहज वातावरणको प्रभाव पर्नु स्वभाविक नै थियो ।’ उनले कहानी सुनाउँदै गए । म सुन्दै गएँ । बस रामनगर पुगिसकेछ ।
बिजय(सहचालक) दाइ ल खाना खाने ठाउँ आयो भन्दै कराउन थाले । बसबाट सबै मान्छे झरे म र ठगिन पनि बाहिर झर्यौ । उनले खाना खाने मनसाय राखे तर म रामनगरको खाना सँग परिचित थिएँ । एकछाक खानाले १० दिनसम्म बिरामी परेको अझैपनि बिर्सिन सक्दिन । हामी होटल छिर्यौ र एउटै टेबलमा बस्यौं । मैले सुख्खा रोटी र ठगिनले खाना मगाए । खाना खाइसक्यौं । उनी चुरोट पिउने गर्दा रहेछन् तर मेरो त्यस्तो कुनै लत थिएन । होटलको काउन्टरको बाहिर झ्यालमा राखेको एक टुक्रा सुपारी टिपेर मुखमा हाले । उनी स्मोकिङ जोन तिर लागे । केही समयपछि हामी बसमा पस्यौं । बस अगाडि बढ्यो रातको ११ बजिसकेको थियो । केही बेरपछि उनले फेरि बाँकी कहानी सुनाउन थाले ।
उनी असाध्यै सुन्दर थिइन् । मलाई उनी स्वर्गबाट ईश्वरले मेरै लागि पठाइएको अनुपम उपहार हो जस्तो लाग्थ्यो । २ वर्ष बित्यो मेरो ल्यापटपमा आफ्नो भन्दा उनको सामग्री बढी छ । यसरी उनले ३ वर्षमा नर्सिङ पढाइ सकिन् । म पनि खुसि थिएँ । सोच्थेँ, अब नेपाल गएर बिवाह गरिन्छ । उता बसका सबै यात्रु निदाइ सकेका थिए । हामी भन्दा २ सिट अगाडि १ जना दिदि फोनमा कुरा गरिरहेकि थिइन् । सहचालक भाई उनलाई हेरेर खुब मस्किरहेका थिए । ‘कुन स्वर्गकी परि हौ तिमी…’ अगाडि चालकले सानो स्वरमा गीत बजाइरहेका थिए ।
ठगिनको अनुहार मलिन थियो । उनले फेरि सुनाए । उनी सानो जागिर गर्छिन् । म कृषिफर्म खोल्छु बङ्गुर पाल्छु, त्यहाँ पोखरि खनेर माछा पाल्छु । एक्लै सकिँदैन होला पार्टनर खोजौँला भन्ने योजना बनाउदै थिएँ । केहि पैसा उनका लागि खर्च भयो केही जम्मा भएको थियो । उनी पढाइ सकेर इन्टनसिप गर्दै थिइन् । म पनि नेपाल चाँडै फर्कनको लागि टिकट तयार गरिरहेको थिएँ । मनमा सोच्दै थिएँ चाँडै मेरो कल्पनाको सागरमा पुग्दैछु । स्वर्गको परिसँग मेरो भेट हुँदैछ । साँच्चै म भाग्यमानी रहेछु । नेपाल फर्कन १५ दिन बाँकि थियो ।
अचानक उनी अलिक टाँढा भएको महसुश भइरहेको थियो । उनको ब्यवहार रुखो हुँदै गएको थियो । उनको म्यासेज आयो । म्यासेजमा लेखेकी थिइन् ‘आजसम्मको सहयोग र साथका लागि धन्यवाद । तपाई र मेरो कुनै सम्बन्ध छैन । मेरो विवाह भयो म अब अविवाहित केटी जस्तो ब्यवहार गर्न सक्दिन । तपाईं पनि चाँडै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ विवाह गर्नुहोला । तपाईंको जीवनमा सधैं सुखहोस । म पनि बाध्यतामा छु । अहिले दाउन्ने नवलपरासीमा छु । बाई बाई सानू ।’ यति भन्दा आखाँबाट आसु झरिसकेका थिए । उता बसमा दमौलिमा भेट मायालुले सम्झना गरेमा हुन्छ पछि भेट भन्ने गीत बजाई राखेका थिए । म पनि भावुक भइरहेको थिए ।
‘मलाई फेसबुकमा पनि ब्लक गरि, जुलुम बनाएर गई । नेपाल फर्किए काठमाडौंमा गल्लि गल्लि आखा चियाए कतै देख्छुकि तर देखिन, हुन त प्रत्यक्ष रुपमा आजसम्म कतै देखेको पनि छैन । उता नेपालमा साथिभाईसँग मिलेर कृषि फार्म खोलेको दुई महिना नपुग्दै साथीभाई बीच मनमुटाव भयो ।’ उनले सुनाउँदै गए, ‘त्यो पनि डुब्यो । नकमाएको हैन सर, धेरै पैसा कमाए तर आजसम्म रित्तो रित्तै हिँडिरहेको छु । फेरि खाडि पस्नु पर्छहोला । पहिलाको कम्पनीबाट फिनिसमा आएको । आज मेनपावरले बोलाएको छ । पासपोर्ट उहीसँग छ । पैसा पनि ५० हजार रुपैयाँ दिएको छु । अब के के हुने हो सर …’ यसरी निरन्तर उनले आफ्ना कथा व्यथा सुनाउँदै गए । बिहानीको झिसमिसेमा बस कलंकी पुग्यो । बस नयाँ बसपार्कतर्फ लाग्यो । म कलंकी झरेँ । भाइ नयाँ बसपार्क तर्फ लागे । अब वैदेशिक यात्रा र उनको जिन्दगी के हुने हो, थाहा छैन । तर उनको आगामी जीवन सुखमय र सफल होस् ।
याे पनि : यात्रा क्षितिजबाट उदाएकी परी
Tags: खबरबिट साहित्यबिनाेद काेइरालायात्रासाहित्य
रूकुम घटनाः पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि डाक्टरलाई आपत
राजनीतिको नाममा ब्यापार